Kalluunka L-carnitine (541-15-1) HPLC8698% | Lacagta Fatahaada AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / L-carnitine budada
Rating: SKU: 541-15-1. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxaa la socda awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada L-carnitine (541-15-1), iyada oo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Fiidiyowga bakteeriyada L-carnitine
Kalluunka L-carnitine Calaamadaha aasaasiga ah
Qaaciddada Molecular: C7H15NO3
Miisaanka kelli: 161.2
Dhibcaha Biyaha: 197-212 ° C
Isticmaalka budada L-carnitine
Nadiifinta L-carnitine Magacyada
Qiyaasta caadiga ah ee L-carnitine waa xmUMX-500 mg maalintii.
Inkasta oo qiyaasta daawadu u kala duwan tahay waxbarashada, ayaa halkan ka muuqda guud ahaan isticmaalka iyo qiyaasta qaab kasta:
(1) Acetyl-L-Carnitine: Foomkani wuxuu ugu fiican yahay caafimaadka maskaxda iyo shaqada. Qiyaaso kala duwan 600-2,500 mg maalintii.
(2) L-Carnitine L-Tartrate: Foomkani wuxuu waxtar badan u leeyahay waxqabadka jimicsiga. Qiyaaso ayaa ku kala duwan 1,000-4,000 mg maalintii.
(3) Propionyl-L-Carnitine: Foomkani wuxuu ugu fiican yahay hagaajinta socodka dhiigga ee kuwa leh dhiigkarka ama xaaladaha caafimaad ee la xiriira. Qiyaaso ayaa ku kala duwan 400-1,000 mg maalintii.
Iyadoo ku saleysan dib-u-eegista cilmi-baarista, ilaa XMUMX mg (Xamuus Xajka) maalin kasta waxay u muuqataa mid badbaado u ah isticmaalka muddada dheer iyo qiyaasta wax ku oolka ah ee noocyada kala duwan ee L-carnitine.
Digniin ku saabsan budada L-carnitine
Daawooyinka kale waxay la macaamilaan levocarnitine, oo ay ku jiraan dawooyinka dhakhtarku qoro iyo kuwa la iibsado, fitamiinnada, iyo alaabta dhirta. U sheeg mid kasta oo ka mid ah bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka wixii ku saabsan dhammaan daawooyinka aad hadda isticmaashid iyo dawooyinka aad bilowdo ama joojiso isticmaalka.
Root L-carnitine Powder instructions
Sida daawooyinka ugu badan ee dabiiciga ah, L-carnitine waxay u muuqataa mid si nabadgelyo leh oo xor ka ah waxyeello culus marka loo isticmaalo si macquul ah iyo sida lagu faray.
Hal daraasad ayaa baaray badbaadada L-carnitine iyadoo la siinayo kaqeybgalayaasha 3 garaam maalin kasta 21 maalmood. Qeyb dhiig oo dhameystiran ayaa loo sameeyay kaqeybgale kasta bilowga iyo dhamaadka daraasada, wax saameyn taban ahna lama arag.
L-carnitine Root Powder
Suuq-geyn L-carnitine Suugaanta
Sida loo iibsado budada L-carnitine ee AASraw